Airbus Passenger Plane kutendeuka kuva Freighters: Iyo Ascent Aviation Service modhi
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Airbus Passenger Plane kutendeuka kuva Freighters: Iyo Ascent Aviation Service modhi
Sine Draco Aviation Development Ltd. ("Sine Draco") nhasi yazivisa kuiswa kweiyo prototype A321-200 ndege kuAscent Aviation Services muTucson, Arizona, yekushandurwa kubva kune mutyairi kuenda kunotakura zvinhu. Ndege ichadomwa iyo A321-200 SDF ine FAA Supplemental Type Chitupa mvumo inotarisirwa mu3.rd kota 2022.
Iyo Sine Draco A321-200 SDF mutakurwi kune wekushandura mutakurwi inopa yakanakisa mhinduro yezvehupfumi yechizvarwa chinotevera narrowbody mutakurwi.
Iko kushandurwa kunosanganisira kuiswa kwe142-inch-wide ne 86-inch-yakakwirira main deck cargo musuwo, Chikamu E chikuru chekodhi yekutakura zvinhu zvine gumi nemana zvigaro zvemidziyo uye Ancra International yekutakura nhumbi system. Makamuri epasi anotakura zvinhu anogona zvakare kutora makontena gumi, iyo A321 iri yekutanga ndege mundiro yakatetepa yekutakura muviri nekwanisi iyi."Kuburitswa kweSine Draco prototype A321-200 SDF yekushandura chiitiko chakakosha kuchirongwa chedu," anodaro Chief Executive Officer weSine Draco, Alex Deriugin. “Zvese zvinhu zvikuru zviri mukugadzirwa uye zvakarongwa, madhizaini einjiniya uye zvinyorwa zvehunyanzvi zviri mumatanho ekupedzisira ekupedzisa, uye zvikamu uye maturusi ari kusvika kunzvimbo yeAcentcent zuva nezuva. Kuenzanisirwa kwendege ndiko kupedzisa kwezvikwata zveSine Draco Engineering, Operations uye Supply Chain zvinoshanda nesimba mukubatana pamwe nevatinoshanda navo mumaindasitiri. ”Ascent Aviation Services ichave ichiita shanduko yendege nekuzadzisa yekubata vashandi, kugadzirisa shanduko uye kuongorora zvinodiwa. Cheki inorema yekuchengetedza cheki yakapedzwa munguva pfupi yapfuura pane iyo prototype ndege uye ichazadziswa panguva yekushandurwa.
Ascent ichapawo yekuchengetedza uye nendege rutsigiro panguva yepasi uye chirongwa chekuyedza kubhururuka zvichitevera kutendeuka.
Dave Querio, Mutungamiri uye CEO weAscent Aviation Services vanoti, "kuiswa kweiyo ndege yeSine Draco A321-200 SDF muchikamu chayo chekushandura chiratidzo chakajeka chebasa rese rakaomarara zuva nezuva nehunyanzvi paSine Draco uye Kukwira. Ndinokorokotedza iro rese Sine Draco timu nekusangana kwechiitiko ichi. Tese tiri pano paAscent tinokudzwa kuve chikamu chekubudirira kwako uye tinofara kufambira mberi kuchikamu chinotevera chechirongwa chekushandura. "